आज काठमाडौंमा १ जना संक्रमित थपिए, देशभर कति ? | Kendrabindu Nepal Online News
१ श्रावण २०७७, बिहीबार १७:०८
बिहीबार नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का १ सय ६७ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार बिहीबार १ सय ६७ जना नयाँ संक्रमित थपिँदा २ सय १३ जना डिस्चार्ज भएका छन् ।
बिहीबारसम्म नेपालमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या १७ हजार ३ सय ४४ पुगेको छ । बिहीबारसम्म ११ हजार २ सय ४९ जना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् । मन्त्रालय प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार अहिले प्रदेश नम्बर १ मा ६७, प्रदेश नम्बर २ मा १ हजार ९ सय १५ र बागमती प्रदेशमा ४ सय २८ जना संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन् ।
काठमाडौंमा आज १ जना संक्रमित थपिएका छन् । अब काठमाडौंमा २४५ जना, ललितपुरमा ७५ र भक्तपुरमा ४५ जना गरि उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या अब ३६५ पुगेको छ ।
Prevनेपालमा कोरोना संक्रमित घटेकै हो कि परिक्षण घटेको हो ?
नेपालको फिफा वरीयता यथावत् , शीर्ष १० स्थानमा कुन देश ?Next